Classic famakiana penina
Multi-asa miresaka penina
Ankizy mamaky penina
Fanabeazana Reading Pen
Aza mikasika mamaky penina
Electronic Toys Fa Kids
Interactive rindrina afisy
fianarana & fampandrosoana kilalao
Search ny Age
Baby (0-12 volana)
Voalohany Grade & Ankoatra (6+ yrs)
Akanin-jaza (5-6 yrs)
Talohan'ny K (4-5 yrs)
Garabola (3-4 yrs)
Zaza (1-3 yrs)
Hiady ho 6,18, Shinoa tapaky ny taona varotra mafana ny andro!
ny mpitantana ny 19-06-14
6,18 dia tapaky ny volana Shinoa-taona mafana varotra andro! Ankehitriny, isika rehetra dia namokatra be atao amin'ny faran'ny May mba hanohanana akaiky 6.18. Maniry dia afaka manao zavatra tena varotra vola miditra. * Ako TECH miezaka ny mamaky mamokatra hatrany penina, tany am-boalohany fanabeazana kilalao, sns amin'ny kalitao ambony.
Hong Ye Industrial Zone, No2 Huayuan Road, Hui Zhou, Guangdong, Sina
No 303, B Bldg, Gang Shen Innovation Industrial Zone, Da Lang, Long Hua District, Shen Zhen,, Sina